» कोच प्रमोद खरेलको टिमबाट कसको होला जीत ?
१७ पुष २०७८, शनिबार ०६:४४
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १७ पुस । द भोइस किड्स नेपालको लाईभ राउण्डमा कोच प्रमोद खरेलको टिमबाट दमदार प्रस्तुतिहरु भएका छन् । द भोईस किड्सकै सम्भावित विजेता कोचका रुपमा हेरिएका कोच प्रमोदको टिम सबैभन्दा बलियो भएको दर्शक श्रोताहरु तर्क गर्छन् । लाईभ शोमा कोच प्रमोदको टिमका प्रतियोगीहरुले दमदार प्रस्तुति दिएका कारण अब उनको टिमबाट अघिल्लो राउण्डका लागि कुन कुन प्रतियोगीहरु अगाडि बढ्लान् भनेर पनि दर्शक श्रोताहरुले आफै अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । भोटिङ राउण्ड भएकोले उत्कृष्ट १६ मा अब कोच प्रमोदका ४ जना प्रतियोगीहरुमात्र प्रवेश गर्नेछन् । कोच प्रमोदको टिमबाट लाईभमा दर्शिल पन्त, शुभम निरौँला, समृद्धि परियार, सिम्रन आले, रुक्साना लिम्बु र जेनिश उप्रेतीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट १६ मा पुग्लान् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
कोच प्रविशाको टिमबाट कोच प्रमोदको टिममा स्टिल भएका दर्शिल पन्त उत्कृष्ट १६ मा पुग्ने सम्भावित प्रतियोगी हुन् । ९ वर्षीय दर्शिल गुल्मी निवासी हुन् । उनी अहिले धापासीमा बसोबास गर्छन् । त्यस्तै कोच मिलनको टिमबाट स्टिल हुँदै कोच प्रमोदको टिममा आएका शुभम निरौँला पनि उत्कृष्ट १६ का दाबेदार हुन् । ११ वर्षीय शुभम काठमाडौँको टिकाथली निवासी हुन् ।
कोच प्रमोदको लुकेका हिरा हुन् समृद्धि परियार । लाईभ शोमा पफोमर अफ द डे जितेर उनले आफुलाई विजेताको दाबेदार बनाएकी छिन् । समृद्धि द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल एघारौँ प्रतियोगी हुन् । १४ वर्षिया समृद्धि नख्खिबोट निवासी हुन् । त्यस्तै कोच प्रमोदको टिमबाट रक स्टारका रुपमा उदाएकी सिम्रन आलेलाई दर्शक श्रोताले फाईनलसम्मै पुग्नसक्ने प्रतियोगीका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । १२ वर्षीया सिम्रन गोरखा निवासी हुन् ।
कोच प्रमोदको टिमबाट दर्शक श्रोताले सर्वाधिक रुचाएका प्रतियोगीहरुमध्येका एक हुन् रुक्साना लिम्बु । उनलाई दर्शक श्रोताले कोच प्रमोदको टिका हिराका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । ८ वर्षीया रुक्साना झापा निवासी हुन् । त्यस्तै द भोईस किड्सकै विजेता दाबेदार गरिएका जेनिश उप्रेती कोच प्रमोदको टिमका अर्का दाबेदार हुन् । जेनिश द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल चौथो प्रतियोगी हुन् । द भोईस किड्स नेपालमा सबैभन्दा छिटो कोचको कुर्सी घुमाउन सफल जेनिश ११ वर्षका छन् । उनी झापा निवासी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–